281 Dugsiga Barashada Fogaanta - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
281 Distance Learning School waxaa la siiyaa sanad dugsiyeedka 2020-2021 iyadoo la raacayo Amarka Maamulka ee Guddoomiyaha iyo Waaxda Waxbarashada ee Minnesota sababo la xiriira COVID-19. Dugsigu wuxuu u adeegaa ardayda Kindergarten illaa Fasalka 12aad. Dugsigu wuxuu bixiyaa "wakhti kasta, meel kasta" barasho, waxaana wax ka dhiga macallimiinta iyo shaqaalaha Dugsiyada Robbinsdale Area.
Ardayda ka diiwaangashan 281 Distance Learning School waxay kusii nagaan doonaan barashada fog ilaa sanad dugsiyeedka dhammaadkiisa (Juun 9, 2021).
Dugsiga Hoose (Fasalka K-5aad)
Maamulaha: Nancy Froelich
Secondary (dugsiga dhexe & sare)
Maamulaha: Jeffrey Stovall
Warsidaha Abriil 30
Akhriso cusbooneysiinta toddobaadkan, oo ay ku jiraan usbuuc qadarinta shaqaalaha, maalmaha soo socda ee aan dugsiga ahayn, soo ururinta qalabka iyo waxyaabo kale oo badan.
Warsidaha Abriil 16
Akhri cusbooneysiinta toddobaadkan, oo ay ku jiraan qiimeynta FASTBridge, Diiwaangelinta Xanaanada anad xisaabta MCAs.
Macluumaadka Imtixaanka MCA ee Fasalada 3-5
Abriil 13 2021
Xusuusin macluumaadka loogu talagalay MCA-yada dhacaya toddobaadkan. Fiidiyow ayaa loo sameeyay si sidoo kale dib loogu eego macluumaadka.
Wargeyska 8 Abriil
Waxyaabaha muhiimka ah ee muhiimka ah waxaa ka mid ah taariikhaha baaritaanka FASTBridge, macluumaadka MCA, dib u eegista qalabka ee dib u eegista hore.
Wargayska Maarso 26
Fasax Guga Farxada Leh! Waxaan ku arki doonnaa Talaadada, 6da Abriil bilawga rubuca 4.
Warar cusub oo muhiim ah oo ku saabsan imtixaanka MCA ayaa lagu soo daray joornaalkan.
Wargeyska Maarso 11
Fadlan akhri wararka cusub ee ardayda barashada masaafada aasaasiga ah ee lagu wadaagay warsidaha toddobaadkan.
Sidee Ayuu U Shaqeeyaa Barashada Internetka?
Qodobbada Muhiimka ah ee la tixgelinayo
Macluumaadka Dugsiga Hoose
Waxbarashada Gaarka ah / 504
Barashada Cilmiga Bulshada (SEL)
Imtixaanka Gobolka / Qiimeynta
Ardaydu waxay ku dhammaystiraan shaqada fasalka khadka tooska ah iyagoo taageero ka helaya macallimiinta, waalidiinta iyo xubnaha qoyska. Ardaydu waxay baran karaan "halka, sida iyo goorta" ay doonayaan inay dhammaystiraan shaqadooda toddobaadlaha ah. Manhajka waxaa la heli karaa 24 saacadood maalintii, toddobo maalmood usbuucii.
Macallimiintu waxay diyaariyaan shaqooyinka waxayna siiyaan koox yar iyo mid-ilaa-mid ah (1: 1) taageero markii loo baahdo. Kalfadhiyada tooska ah ayaa looga qayb geli karaa ama ardaydu way daawan karaan casharka la duubay.
Ardayda waxaa loo damaanad qaadayaa goobta iskuulka gurigooda, laakiin looma balan qaadayo fasalkooda gurigooda Sebtember. Tani waxay sabab u tahay isu dheellitirka tirada fasallada.
Ardayda dhigata dugsiyada magnetka (Pilgrim Lane, Robbinsdale Spanish Immersion iyo SEA) waxaa loo damaanad qaadayaa kursigooda xitaa haddii ay kaqeyb qaataan 281 Distance Learning School.
Ardayda waxaa la dhigi doonaa qolka-guriga cusub / fasalka weyn ee iskuulka waxbarashada fog. Macallimiinta Dugsiga Robbinsdale ee ka socda iskuulo kala duwan ayaa wax ka dhigi doona dugsigan. Dhammaan macallimiinteennu waxay helayaan isla kobcin xirfadeed oo ku saabsan koorsooyinka tacliimeed ee aasaasiga ah waxayna ka caawin doonaan ardayda inay u gudbaan fasalladooda cusub ee Distance Learning.
Ardayda badankood waxay leeyihiin macallimiin ka socota dugsigooda. Si kastaba ha noqotee, tan looma ballan qaadi karo dhammaan dugsiyada illaa diiwaangelinta iyo shaqaalaynta la go'aaminayo. Lambarada diiwaangelinta awgeed, waxaa laga yaabaa inaan ku yeelanno fasallo isku dhafan dugsiyada qaarkood (tusaale: fasalka K / 1).
Ardayda dugsiga hoose ee ka diiwaangashan 281 Distance Learning School, manhajku wuxuu la mid yahay kan dugsiyada hoose ee degmada wuxuuna waafaqsan yahay Heerarka Tacliinta ee Minnesota.
Barnaamijyada aasaasiga ah ee akhriska, qorista, xisaabta, sayniska iyo cilmiga bulshada ayaa lagu daray.
Ardaydu waxay sii wadi doonaan inay yeeshaan fasalo takhasus leh oo ay ka mid yihiin farshaxanka, muusikada, warbaahinta iyo waxbarashada jir-dhiska.
Band / orchestra ayaa u sii socon doona ardayda (orkestra fasalka 4aad iyo 5aad, kooxda fasalka 5aad).
Ardaydu waxay sii wadi doonaan kaqeybgalka shirarka subaxa, kooxaha yar yar iyo waxbarida fasalka oo dhan.
Ardayda Robbinsdale Spanish Immersion / Northport Dual Immersion waxay heli doonaan waxbaridooda Isbaanishka, iyadoo lala jaan qaadayo dugsigooda gurigooda.
Isbaanishka, FARJIRKA Farshaxanka iyo barnaamijyada 'SEA model' ayaa sii wadi doona in loogu deeqo ardayda ka socota dugsiyada magnet.
Ardaydu waxay sii wadi doonaan inay u adeegsadaan Schoology iyo Seesaw meeleynta iyo shaqada koorsada manhajka iyo qaabdhismeedkuna waxay lamid noqon doonaan qaabka hadda jira. Ardaydu waxay heli doonaan lambar cusub oo QR ah oo loogu talagalay fasalkooda cusub ee guriga (K - 2) iyo Koorso Koorso cusub oo loogu talagalay cilmiga cilmiga (Fasallada 3 - 5).
Habka barashada masaafada hadda ee nuxurka aasaasiga ah wuxuu kusii socon doonaa 281 Distance Learning School. Tan waxaa ka mid ah qaabka "Barashada Jidadka" ee sharraxaadda hawl maalmeedka iyo toddobaadlaha ah (ma aha kaararka dhibcaha ee la isticmaalay Gugii hore).
Aag kasta oo ka kooban waxay yeelan doontaa:
"Waa Inuu Samee" - taas oo looga baahan yahay dhammaan ardayda inay dhammaystiraan.
"Waa Inuu Sameeyaa" - taas oo ah doorashada uu ardaygu ku dhammayn karo.
"Ku hammi in aad wax qabato" - taas oo ah xulasho isla markaana u qaadaysa waxa ku jira qoto dheer. Kuwani waa waxqabadyo adag oo ku saleysan heerarka heerarka fasalka.
Ardayda Aasaasiga ah (K-2) waxay marin u heli doonaan barnaamijka wacyi gelinta / codadka ee khadka tooska ah ee loogu yeero Lexia Isticmaalka Lexia, ardaydu waxay si madaxbanaan ugu shaqeeyaan xawaare u gaar ah iyagoo maraya dariiqooyin waxbarasho oo shaqsiyeed si ay u horumariyaan xirfadaha aasaasiga ah ee akhriska ee dhawaqa iyo wacyiga dhawaaqa qaab habeysan, isku xigxiga.
Ardayda Dugsiyada Dhexe iyo Sare
Ardayda iska diiwaangelisa barashada masaafada waxay la sii joogi karaan macallimiintooda hadda.
Ardayda dugsiga dhexe waxay ka heli doonaan tilmaanta 'live' guriga afar maalmood usbuucii.
Ardaydu waxay sii wadi doonaan inay helaan waxbarista asynchronous (oo aan toos ahayn) Arbacada.
Waqti, Filasho iyo Dhiirigelin
Waqtiga: Hubso in ardaygaagu u qorsheeyay waqti ku filan oo uu ku dhammaystiro hawl maalmeedka si macquul ah.
Filashooyinka: Ku dhiirigeli ardaygaaga inuu si firfircoon u isticmaalo Jadwalka Meelaynta si uu ula socdo waxa koorsada ay tahay inay dhammaystiraan maalin kasta. Dejinta iyo gaarista yoolalka maalinlaha ah waxay ka caawineysaa ardayda inay dhiirrigeliyaan oo ay go'aansadaan inay guuleystaan.
Weydiiso Jawaab celin oo aad Dhiirrigeliso Maalin kasta: Ka hubi ardaygaaga adigoo weydiinaya
Maxaad baratay maanta?
Maxaad maanta ku guuleysatay?
Maxaad maanta caqabad ku aragtay?
Sidee uga gudubtay caqabadahaas?
Sideen kaaga caawin karaa inaad guul gaarto?
Ardayda dugsiga dhexe iyo sare wali waxay awoodi doonaan inay kaqeybqaataan howlaha iskuulka. Sharciyada Dugsiga Sare ee Gobolka Minnesota (MSHSL) ayaa la raacaa.
Adeegyada waxbarashada gaarka ah ayaa la siin doonaa ardayda ka diiwaangashan dugsiga 281 Distance Learning ee u qalma adeegyada waxbarashada gaarka ah. Qiimaynta ardayda loo diray qiimeynta waxbarashada gaarka ah ayaa la qaban doonaa. Dugsigu wuxuu wax ka qaban doonaa baahiyaha ardayga ee lagu diiwaangeliyey Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) ee ardayga.
Bixiyeyaasha adeegga waxbarashada gaarka ah waxaa ka mid ah macallimiinta waxbarashada khaaska ah, Macallimiinta Waxbarshada Jidh-dhiska Horumarinta La-qabsiga (DAPE), daaweeyayaasha shaqada, daaweeyeyaasha jirka, kiliiniglayaasha hadalka iyo luqadda, iyo bixiyeyaasha kale ee adeegga la xiriira.
Ardayda hadda haysta meel 504 ah ayaa sii wadi doona inay qorshaha hirgeliyaan 281 xubnood oo ka tirsan shaqaalaha Iskuulka Kaabashada Fogaanta.
Dugsigu wuxuu raaci doonaa tilmaamaha ay dejisay Waaxda Waxbarashada ee Minnesota ee Nidaamka Sharciga iyo 504 Nidaamyada.
Qalabyo ayaa la siiyaa dhammaan ardayda dhigata Dugsiyada Aagga Robbinsdale: iPads loogu talagalay ardayda dhigata Fasallada K-2aad iyo Chromebokes ee ardayda ku jirta Fasallada 3aad - 12aad. Qalabka aagga hoose ee degmada dugsiga.
Barnaamijyada teknolojiyadda waxaa ka mid ah Seesaw, Schoology iyo Edgenuity.
Helitaanka internetka waa masuuliyada qoyska; goobo kulul oo ka jira degmada ayaa la heli karaa.
Ardaydu waxay la kulmi doonaan macallinkooda loo xilsaaray Kulamada Subaxnimo si kor loogu qaado Fayoobaanta Dareenka Bulshada. Manhajka Tallaabada Labaad waa loo sii wadi doonaa in lala isticmaalo ardayda - Manhajka Tallaabada Labaad waa manhaj asaasi ah oo diiradda saaraya dhammaan qeybaha maaraynta shucuurta, wacyiga xaaladaha, iyo gaaritaanka tacliinta.
Imaanshaha waa muhiim! Ardaydu waa inay:
Si joogto ah u gal
Ka qaybgal fadhiyada khadka tooska ah ee macallinka / macallinka Distance Learning Robbinsdale
Koorso toddobaadle ah oo dhammaystiran
Ardayda buuxisa shuruudaha waxaa loo tixgeliyaa xaadiritaanka
Ardayda aan buuxin shuruudaha waa laga saari doonaa barnaamijka
Qiimaynta Buuxda ee Minnesota waxaa lagu bixiyaa Fasalada 3 - 11. Waaxda Waxbarshada ee Minnesota ayaa noo soo wargalin doonta nidaamka ardayda online-ka ah. Ardayda waxaa laga yaabaa inay u baahdaan inay yimaadaan goobta dugsigooda si ay u dhammaystiraan qiimeyno kale (Fastbridge, CoGat, iwm.).